Ungabakhetha njani abatshati kunye neNdoda egqibeleleyo
Umyeni uhlala ecela izalamane zamadoda okanye abahlobo abasondeleyo ukuba beme njengabakhaphi bakhe emtshatweni. Unokukhetha ukubuza kwiqabane lakhe okanye omnye obalulekileyo komnye wabafazi abaza kutshata ukuba yena nomtshakazi wakhe bachitha ixesha elininzi kunye nabo njengesibini.
Umyeni ucela umntakwabo, umhlobo osenyongweni okanye utata ukuba abe yeyona ndoda yakhe ibalaseleyo. Akuwenzi mahluko nokuba oyena mntu ulungileyo akatshatanga okanye utshatile. Nangona oyena mntu ulungileyo enokuba nemisebenzi embalwa kunentombazana ehloniphekileyo, imisebenzi yakhe ibalulekile, ke cinga ukuthembeka kwaye ukhethe oyena mntu ulungileyo ngobulumko.
Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba unamadoda amabini owafunayo njengamadoda afanelekileyo, kwamkelekile ngokufanelekileyo ukubanika zombini isihloko. Abakhwenyana abaninzi basondele kooyise kodwa abayazi indlela yokubabeka njengomtshato; ukuba notata wakho ame njengoyena mntu ubalaseleyo kuyindlela entle yokumfaka kumsitho. Unokuba nobunzima bokuthatha isigqibo phakathi kwabantakwenu ababini okanye abahlobo. Omabini la madoda anokuba noxanduva ngokulinganayo kwaye ayafumaneka, ke ngoko ukubabeka bobabini kwindawo kusebenza kakuhle. Ngokukhawuleza kangangoko unakho, qiniseka ukuba uchaza ngokucacileyo ukuba ngubani oza kuba ngumphathi kweyiphi imisebenzi. Indoda ebalaseleyo ine-assortment yoxanduva ngaphambi nangexesha lomtshato, kwaye kufanelekile ukuba alungele ukuqhuba nayiphi na into ngomzuzu wokugqibela okanye anike uncedo nakubani na oyifunayo emtshatweni.
Indoda ebalaseleyo kufuneka igcine iliso ngaphandle kwazo naziphi na izinto ezimbi ezinokubakho kwitheko le-bachelor, ukuzilungiselela isidlo sangokuhlwa kunye nolwamkelo. Kuya kufuneka ukuba akulungele ukujongana nezinto ezingalindelekanga kwaye enze konke okusemandleni akhe ukuzama ukunqanda naziphi na izihlandlo ezihlazo kumtshakazi nomyeni.
Omnye umlindi oyindoda ngumlindi omncinci ongumyeni, ngokwesiko ophakathi kweminyaka eli-9 ukuya kweli-14 ngexesha lomsitho, umi ngaphambili epasejini nomyeni; akahambi ezantsi ehamba nentombazana yeentyatyambo. Indoda eganiweyo encinci kulindeleke ukuba iyeyona mininzi kwimisitho yomtshato wonke oya kuyo, kodwa akunyanzelekanga ukuba athathe inxaxheba okanye enze igalelo kwitheko le-bachelor.
Ama-usher ahlala eyindoda, kwaye umahluko phakathi kwabangenisi kunye nabagadi benyani kukuba abahlali bahlala kwizitulo ngexesha lomsitho endaweni yokuma esibingelelweni nomyeni. Uninzi lwabantu abatshatileyo bakhetha ukuba abo babakhonzayo basebenze njengabahambisi, kodwa banokuba zizikhundla ezibini ezahlukeneyo.
venlafaxine dosage yoxinzelelo
Itshathi yokusebenzisana kweziyobisi
iqala nini ibhola yamaphupha
Iziphumo zeengcambu ze-valerian
bath iimpawu zetyuwa yeziyobisi
yenzani i-cbd gummies
isetyenziselwa ntoni i-valacyclovir hcl